May 19, 2019 - CeleLove
အဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူအား သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်
May 19, 2019 Cele Love 0
အဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူအား သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့် မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို.နယ် ကော. ခပုံကျေးရွာ အလည်ပိုင်း ရထားလမ်းအနီးနေ. ဒေါ်…. ၏ သမီး မ….. (၁၂)နှစ်အရွယ် ခလေးအား ဒေါ်….၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦး…. ယခင် အိမ်ထောင်မှ ပါလာသော သား မောင်ပိုင်စိုးသူ (ခ) […]
ပျိုမေတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ပြင်ဆင်ခြယ်သနည်း (၁၀) မျိုး
ပျိုမေတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ပြင်ဆင်ခြယ်သနည်း (၁၀) မျိုး အလှအပကြိုက်တဲ့ ပျိုမေလေးတွေ လှသထက်လှအောင် ပြင်ဆင်ခြယ်သဖို့အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး လုပ်ရလည်းလွယ်၊ အသုံးလည်းဝင်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ….. (၁) အိုင်းလိုင်နာဆွဲတဲ့အခါမှာ အိုင်းလိုင်နာအရည်ကိုလည်း သုံးချင်တယ် လက်ကမငြိမ်လို့ ဆွဲတိုင်းလည်းမသပ်မရပ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ သူလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ […]
မနေ့ကလည်း ငိုခဲ့ပြီးပြီ” ဒီနေ့လည်း ငိုခဲ့ပြီးပြီ” မနက်ဖြန်ကစပြီး ရယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ”
မနေ့ကလည်း ငိုခဲ့ပြီးပြီ” ဒီနေ့လည်း ငိုခဲ့ပြီးပြီ” မနက်ဖြန်ကစပြီး ရယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ” “ကိုယ့်စိတ်ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့စိတ်မညစ်ရအောင် ဒီစာလေးဖတ်ပါနော်…. ကိုယ့်ကို နှိပ်စက်နိုင်နေတဲ့ အတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့ ….. ကိုယ့်စိတ်ကို ပူလောင်စေတဲ့ အတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့ ….. ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့ ….. ကိုယ့်ကို မခေါ်ချင်တဲ့ […]
နို့သီးယားကိုပြန်လာမှလုပ်ပေးမယ် 😂😂😂 ဖုန်းဆိုင်​ တစ်​ဆိုင်​သို့​လူတစ်​​ယောက်​ ဝင်​လာပြီး ​မေးသည်​ …. ။ ” ​မောင်​ရင်​ – ​စွေ​စောင်း ရှိလား . . . ?” ဆိုင်​ရှင်​က နားမလည်​စွာဖြင့်​ ” ဘယ်​က ​စွေ​စောင်းလဲ — . . […]
မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးတင်ဆောင်လာသောကား တိမ်းမှောက် ၄ ဦးသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးတင်ဆောင်လာသောကား တိမ်းမှောက် ၄ ဦးသေဆုံး ယနေ့၁၉.၅.၂၀၁၉ရက်နေ့နံနက်တွင် မြန်မာနိူင်ငံသား (၁၀)ဦးကျော်ခန့်သယ်ဆောင်လာသည့် ကားတစ်စီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၉၀ကျော်ဟိုက်ဝေးလမ်းမပေါ်တွင် တိမ်းမှောက်သဖြင့် လူလေးဦးသေဆုံးကြောင်းကြားသိရသည့်အတွက် ကူညီမှူပေးနိူင်ရန် မလေးရှားနိူင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက်အခင်းဖြစ်နေရာသို့ သွားရောက်လျှက်ရှိပါတ ယ် …။ ကပုန်း(၇)ရက်သားသမီးနာရေးကူညီမူအသင်း […]
နိုင်ငံခြားသူတွေရဲ့ မိုက်ရိုင်းမှုကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ (ရုပ်/သံ) ထိုင်းနိုင်ငံက ခရီးသွားအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးရဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ကိုယ်ကိုလာစော်ကားသလို ခံစားခဲ့ရကြောင်း လူမှုကွန်ယက်တွင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနှင့်တစ်ကွ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် …. ။ သူမ၏ ခြေထောက်နှင့် သူ့မျက်နှာမှာ တစ်တန်းထဲဖြစ်နေပြီး ခြေအိတ်အနံ့ဆိုးများကြောင့် မခံနိုင်ဖြစ်ကာ ခြေထောက်အောက်ချပေးရန် […]
လက်မောင်းမှာရှိတဲ့ အဆီတွဲတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် အိမ်တွင်း လေ့ကျင့်ခန်းများ
လက်မောင်းမှာရှိတဲ့ အဆီတွဲတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်မယ့် အိမ်တွင်း လေ့ကျင့်ခန်းများ လက်မောင်းသားတွေ တွဲလာတာတွေက အကြောင်း (၂)မျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပထမတစ်မျိုးက အသက်အရွယ်ကြောင့် ကြွက်သားတွေ ပျော့တွဲလာတာနဲ့ ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ အဆီများတာကြောင့် တွဲလာတာပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) Push-Ups လေ့ကျင့်ခန်း လက်နှစ်ဖက်လုံးကို ထောက်ထားပြီး […]
ကားအဝင်အထွက်ရှိလို့ ဒီလို ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတဲ့ အိမ်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရမည်
ကားအဝင်အထွက်ရှိလို့ ဒီလို ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတဲ့ အိမ်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရမည် ယာဉ်မရပ်ရ ဆိုင်းဘုတ်ချထားသည့် အိမ်ပိုင်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရတော့မည် …… ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် အိမ်ခြံဝင်းများ အရှေ့၌ ယာဉ်မရပ်ဟူသော ဆိုင်ဘုတ်များ ချထားပါက အခွန်ပေးဆောင်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်က ပြောဆိုလိုက်သည် …… ။“ငါ့အိမ်ရှေ့ယာဉ်မရပ်ရ။ […]
ရုပ်လှတဲ့မိန်းကလေးတွေထက် ဒီိလိုမိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ပိုချစ်ကြပါတယ်…
ရုပ်လှတဲ့မိန်းကလေးတွေထက် ဒီိလိုမိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ပိုချစ်ကြပါတယ်… ရုပ်အလှဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သလို၊ ယောကျာ်းလေးတွေကို အင်မတန်ဆွဲဆောင်နိုင်တာလည်း အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးတွေဟာ ရုပ်လှတဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် ဒီလို အကျင့်လေးတွေရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပိုချစ်ကြပါတယ် ….. ။ (၁) ပြုံးရွှင်နေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု […]
အ၀တ်လျှော်နေတဲ့မိန်းကလေးကို “ငါခေါင်းမူးလို့ နင့်ရဲ့ကာမကိုယူချင်တယ်”လို့ ပြောပြီး အခန်းထဲ ဇွတ်ဆွဲခေါ်ကာ
အ၀တ်လျှော်နေတဲ့မိန်းကလေးကို “ငါခေါင်းမူးလို့ နင့်ရဲ့ကာမကိုယူချင်တယ်”လို့ ပြောပြီး အခန်းထဲ ဇွတ်ဆွဲခေါ်ကာ အ၀တ်လျှော်နေတဲ့မိန်းကလေးကို “ငါခေါင်းမူးလို့ နင့်ရဲ့ကာမကိုယူချင်တယ်”လို့ ပြောပြီး အခန်းထဲ ဇွတ်ဆွဲခေါ်တဲ့ ဖြစ်ရပ် “ငါခေါင်းမူးလို့ နင့်ရဲ့ကာမကိုယူချင်တယ်” ဟုပြောကာတစ်ဆောင်ထဲနေသူမှ သားမယားပြုကျင့်ရန် ကြံစည် လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက် ၌ တစ်ဆောင်တည်းနေသူ မှ သားမယားပြုကျင့်ရန် ကြံစည်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း […]